चैतदेखी कोरोनाको कारण ठप्प पठनपाठन असोजबाट सुरु हुने! शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका सार्वजनिक गर्द – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/चैतदेखी कोरोनाको कारण ठप्प पठनपाठन असोजबाट सुरु हुने! शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका सार्वजनिक गर्द
काठमाडौं, २१ भाद्र । पाँच महिनादेखि कोरोनाका कारण पठनपाठन ठप्प भएको सामुदायिक विद्यालय र केही निजी विद्यालयमा असोज १ गतेबाट पढाइ शुरु हुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका जारी गरी पठनपाठन शुरु गर्ने भएको हो । सो निर्देशिका दुई दिनभित्र सार्वजनिक हुनेछ ।
कपडा सुकाउने क्रममा छतबाट खस्दा एकजनाको मृ’त्यु